सहकारी नियमावली पनि मेरै कार्यकालमा आउँछ : मन्त्री बस्नेत | Sahakari Nepal
सहकारी नियमावली पनि मेरै कार्यकालमा आउँछ : मन्त्री बस्नेत
कार्यकालमा अम्बिका बस्नेतमन्त्रीसहकारी तथा गरिबी निवारणलामो समयको प्रयासपछि देशले सहकारी ऐन प्राप्त गरेको छ । समयसापेक्ष ऐन आएकाले सबै खुसी देखिएका छन् । सहकारी ऐनको मस्यौदा यसअघि नै पठाइएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले केही समय ऐन रोकेर अध्ययन गर्नुभएको थियो । सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले यसपालिको सहकारी मेचमा मन्त्री अम्बिका बस्नेतसँग सहकारी ऐनलगायत समसामयिक विषयमा कुुराकानी गरेको छ ।
लामो प्रतीक्षापछि नयाँ सहकारी ऐन आएको छ, यसले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सहकारी ऐन २०७४ आएपश्चात् यस क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिहरू धेरै हदसम्म कम हुन्छ । साथै सहकारीको संस्थागत विकासमा यो ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ला, तपाईंको कार्यकालमा सहकारी नियमावली आउँछ कि आउँदैन ?
निश्चय पनि सहकारी ऐनको कार्यान्वयनको लागि सहकारी नियमावली निर्माण अति आवश्यक छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् नियमावली बनाउने कार्य द्रुत गतिमा हुन्छ । यसका लागि हामी पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौं । यो मेरो कार्यकाल भित्रै आउँछ ।
अहिलेको ऐन राष्ट्रिय सहकारी नीतिसँग मेल खाने किसिमको छ कि छैन ? यो नीतिमा परिमार्जनको आवश्यकता देख्नुभएको छ कि छैन ?
सहकारी विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूपमा आउने क्रममै छ । यो विधेयक लामो गृहकार्य पछि आएको छ । भोलिको दिनमा यो ऐन परिमार्जनको आवश्यकतै हुन्न भन्नु अपरिपक्व होला । समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन हुँदै जान्छ र त्यो हुनु पनि पर्छ ।
राज्यको संघीयस्वरूप अनुरूप सहकारीका निकायहरू कहिलेसम्म तयार होलान् ?
स्थानीय तहले नै सहकारी दर्ता र नियमन गर्ने अवस्था कहिलेसम्म होला ? संघीय राज्यको अवधारणा अनुरूप संविधानमा नै स्थानीय तहबाट सहकारीको दर्ता तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सहकारी दर्ता तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य गर्न सहजता होस् भनेर सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई समेत मध्यनजर गरी नमुना ऐन निर्माण गरी स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइसकेको छ । सहकारी अनुगमनसम्बन्धी दिग्दर्शन पनि निर्माण भइसकेको छ त्यो पनि आजभोलि नै जाँदैछ ।
अनुगमन र नियमनमा केन्द्रको र स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी के कस्तो रहँला ?
केन्द्रले दर्ता अनुगमनका कार्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने पूर्ण तयारी अवस्थामा छ । हस्तान्तरणपश्चात् सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायमा रहनेछ।
अनुगमन र नियमनमा संघहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिने कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ?
संघहरूले आफ्ना मातहतका सदस्यहरूको सहकारी मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् तिनीहरूको नियमन, अनुगमन गर्न सक्छन् । नियमन, अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा के कसरी लान सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा बृहत् छलफल भइरहेको छ । ऐन नियमअनुसार संघले पाउने जिम्मेवारी पाउँछ ।
अब संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति पनि आयो तपाईंको तयारी कस्तो छ ?प्रत्यक्षमा तयारी छ कि समानुपातिकमा बस्नुहुन्छ ?
मैले काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्पm उम्मेदवारी दिने विचार गरेको छु ।
वामपन्थीहरू एक भएर संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाको निर्वाचन जाने तयारी गरिरहेका छन् यसले तपाईंको पार्टीलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
इतिहासका हरेक कालखण्डमा राष्ट्रमा आएका संक्रमण र चुनौतीको सामना नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । अतिवादको चंगुलमा देशलाई जानबाट बचाउनेदेखि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षार्थ सदैव नेपाली कांग्रेस नै अग्रपंक्तिमा उभिएको छ । मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् संघीयताको चरणमा प्रवेश गरेको छ । समृद्ध राष्ट्र आम नागरिकको चाहना हो । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा नेपाली कांग्रेसले मात्र लान सक्छ भन्ने कुरा नागरिकले रामै्रसँग बुझेका छन् । कसैले एकता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई परास्त गर्छु भन्ने सोच राख्छ भने त्यो दिवास्वनामात्र हुनेछ । नागरिकहरू स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छन् त्यसैले कसैको एकताले नेपाली कांग्रेसलाई कुनै फरक पर्दैन, आजको आवश्कता संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकको आर्थिक समुन्नति हो । कसलाई नेतृत्व दिँदा यो सम्भव छ भन्ने कुरा नागरिकहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
तपाईंको दल नेपाली कांग्रेसले दुवै निर्वाचनमा कस्तो नतिजा ल्याउँला के छ तपाईंको आंकलन ?
तपाईं निश्चिन्त हुनुहोस् । यस पटक नागरिकहरूले नेपाली कांग्रेसलाई अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराउनेछन् । देशमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, शान्ति स्थापना गर्ने कार्यदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका साथै संविधान निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यसम्म नेपाली कांग्रेस सदैव नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकाबाहेक देशमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरा नागरिकहरूले बुझेका छन् । वामशक्तिलाई बहुमत दिँदा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकेर पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने परेको कुरा नागरिकले बिर्सेका छैनन् । 